Tafatafa Niarahana Tamin’ny Bilaogy “Afghan Warrior” · Global Voices teny Malagasy
Tafatafa Niarahana Tamin'ny Bilaogy “Afghan Warrior”
Voadika ny 14 Novambra 2017 3:27 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Mey taona 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanomboka fanadihadiana maromaro niaraka tamin'ireo bilaogera Afgana ny Global Voices. Ny vahiny voalohany dia i Waheed avy amin'ny Afghan Warrior
1 F: Hafiriana ianao no nanomboka nibilaogy ary nahoana no amin'ny teny Anglisy?
1 V .Nanomboka nibilaogy aho tamin'ny 8 Martsa 2005. Te-hanandratra ny feoko sy ny feon'ny vahoakako ho an'izao tontolo izao aho. Satria ny fiteny Anglisy dia fiteny iraisam-pirenena, nanapa-kevitra ny hanoratra ny bilaogiko amin'ny teny Anglisy aho mba hahafahan'ny olona avy amin'ny firenena samihafa mamaky azy.
2 F: Misy antontanisa ve hanomezana tombantombana momba ny isan'ireo bilaogera Afghana sy ny fiteny ampiasain'izy ireo?
2 V: Tsy manana tombatombana antontanisa momba ny isan'ireo bilaogera Afghana sy ny fiteny ampiasain'izy ireo aho, saingy heveriko fa misy bilaogera Afghana mihoatra ny folo no mibilaogy amin'ny fiteny 3 – Anglisy, Dari sy Pashtu.
3Q: Nahatsikaritra (mety ho diso aho) aho fa roa taona lasa izay, betsaka kokoa ireo bilaogy Afgana navitrika noho ny amin'izao fotoana izao. Nahoana?
3 A: Tsy mino aho fa navitrika kokoa ny bilaogy Afgana roa taona lasa noho ny amin'izao fotoana izao. Mihatsara isan'andro isan'andro ny fahalalahana maneho hevitra eto Afghanistan ary mitombo ny isan'ireo mpanoratra sy bilaogera Afgana ary hahita bilaogy Afgana mavitrika kokoa isika amin'ny ho avy.
4 V: Ao Afganistana, misy ireo gazety marobe sy fandaharana amin'ny onjam-peo na fahitalavitra tsy miankina izay maneho ny hevitr'izy ireo an-kalalahana. Inona no azon'ny bilaogy omena kokoa raha ny hevitrao?
4: Raha ny hevitro, afaka manome vaovao amim-pahalalahana kokoa ny bilaogy, tsy tahaka ny fandaharana amin'ny radio na fahitalavitra tsy miankina. Indraindray ny fahitalavitra sy ny radio tsy miankina tsy maneho ny zava-misy sasany satria mbola misy ireo mpiady taloha mbola ao amin'ny fitondrana izay tafiditra tamin'ny ady an-trano tamin'ny taona 1992 izay namoizana aina an'arivony ary nandrava an'i Kabul renivohitra.
5 F: Ahoana no fahitanao ny fivoaran'ny bilaogy any Afganistana tato anatin'ny taona vitsivitsy?
5 V: Hitako fa tena tsara ny fivoaran'ny bilaogy. Tato anatin'ny taona vitsivitsy, loharano lehibe amin'ny fizarana sy fanehoana ny zava-misy momba izay mitranga eto Afghanistan izany. Nahita bilaogera vaovao sasany aho izay nanomboka ny bilaoginy tamin'ny faramparan'ny taona. Nanome rohy momba ireo bilaogera Afgàna 2 aho tao amin'ny tranokalan'ny bilaogiko mba hahafahan'izy ireo mivoatra.
6 F: Maro ve ny bilaogera Afghana mipetraka any ivelany noho ny ao amin'ny firenena?
6 V: Heveriko fa maro ireo bilagoera Afgàna monina ivelan'ny firenena. Misy ireo bilaogera Afgana mibilaogy avy any Etazonia, Angletera ary firenena hafa sasany.
7 F: Afganistana dia firenena manana fizarazarana ara-poko lehibe. Mahatsiaro tahaka izany koa ve ianao amin'ny bilaogy? Na hoe, misy ve ny fizarazarana ara-poko ao amin'ny tontolon'ny blaogy?
7 V: Maneho ny vahoaka manontolo ao Afghanistan ny bilaogiko. Na dia firenena manana fizarazarana ara-poko lehibe aza i Afghanistan, firenena tokana izy ary tsy ahitana fizarazara ara-poko ny bilaogiko.